Vaovao - Fampirantiana CIOSH 2021
Lockey dia handray anjara amin'ny fampirantiana CIOSH tanterahina any Shanghai, Sina, ny 14-16 apr. 2021.
Booth isa 5D45.
Tongasoa eto hitsidika anay any Shanghai.
Momba ny mpikarakara:
FIKAMBANANA KOMERINA TEXTILE CHINA
Fikambanana indostrialy nasionaly tsy mitady tombom-barotra miaraka amin'ny fankatoavan'ny minisiteran'ny raharaham-panjakana eo ambany fitarihan'ny vaomieram-panjakana misahana ny fanaraha-maso sy ny fitantanana ny fananam-panjakana ao amin'ny filankevi-panjakana.
Niorina tamin'ny taona 2009, Messe Düsseldorf (Shanghai) Co., Ltd. (MDS) dia sampana iray amin'i Messe Düsseldorf GmbH, iray amin'ireo mpikarakara fampirantiana ambony indrindra eran-tany. MDS dia manolo-tena hampahafantatra indostria mitarika varotra varotra any Shina ary manome mpanjifa sinoa sy iraisam-pirenena serivisy fampiratiana ambony.
Momba ny fampirantiana:
China International Occupational Security & Health Goods Expo (CIOSH) dia fampirantiana varotra nasionaly isaky ny lohataona sy fararano nataon'ny fikambanana hatramin'ny 1966. Amin'ny lohataona, dia raikitra ao Shanghai izy io; amin'ny fararano dia ho fitetezam-pirenena izany. Ankehitriny, ny habaka fampirantiana eto dia mihoatra ny 70.000 metatra toradroa, miaraka amin'ireo mpanentana 1 500 mahery ary mpitsidika matihanina 25000.
Momba ny entana fiarovana sy fiarovana ara-pahasalamana:
Ny fiarovana ny fiarovana ny ain'ny mpiasa sy ny fahasalaman'ny asa no fototr'asa fototra sy lalina indrindra amin'ny famokarana azo antoka, ary koa ny fototry ny famokarana azo antoka. Amin'ny fizotry ny famokarana, ny fitsipika "mifototra amin'ny olona" dia tokony harahina. Amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny famokarana sy ny fiarovana, mifantoka amin'ny fiarovana ny zava-drehetra ary ny laharam-pahamehana dia tsy maintsy laharana voalohany. Ny entan'ny fiarovana sy ny fahasalamana ara-pahasalamana (fantatra koa amin'ny hoe "fitaovam-piarovana manokana", ny fanafohezana iraisam-pirenena "PPE") dia manondro fitaovam-piarovana nomen'ny mpiasa mba hisorohana na hanalefahana ireo ratra tsy nahy na ireo loza mitatao eo amin'ny sehatry ny famokarana. Amin'ny alàlan'ny refin'ny fanakanana, ny famehezana, ny fanamafisana, ny fanaparitahana ary ny fampiatoana, dia afaka miaro ny ampahany na amin'ny vatana manontolo amin'ny herisetra ivelany. Amin'ny fepetra sasany, ny fampiasana fitaovana fiarovan-tena manokana no fepetra fiarovana lehibe. Ny vokatra PPE dia mizara ho vokatra fiarovana amin'ny ankapobeny sy vokatra fiarovana ny mpiasa manokana.
Momba ny sokajy fampirantiana:
fiarovana ny loha, fiarovana ny tarehy, fiarovana ny maso, fiarovana ny fihainoana, fiarovana ny taovam-pisefoana, fiarovana ny tanana, fiarovana ny tongotra, fiarovana ny vatana, fiarovana avo lenta, fitaovana fanaraha-maso, fampitandremana momba ny fiarovana ary fitaovana fiarovana mifandraika amin'izany, fanamarinana ny vokatra, fiofanana momba ny fiarovana, sns